Kugadzirira Kungaitwa Misangano yeZvapupu zvaJehovha
Chii Chinodiwa naMwari?
Nei Tichinzi Zvapupu zvaJehovha?
Chokwadi cheBhaibheri Chakawanikwazve Sei?
Takabudisirei Shanduro yeNyika Itsva?
Chii Chauchawana Pamisangano Yedu yechiKristu?
Kuwadzana Nevatinonamata Navo Kunotibatsira Sei?
Misangano Yedu Yakaita Sei?
Nei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?
Ndeipi Nzira Yakanakisisa Yokugadzirira Nayo Misangano?
Chii Chinonzi Kunamata Kwemhuri?
Nei Tichipinda Magungano Makuru?
Basa Redu Rokuparidza Umambo Rakarongwa Sei?
Chii Chinonzi Piyona?
Vakuru Vanobatsira Sei Ungano?
Basa reVashumiri Vanoshumira Nderei?
Vatariri Vematunhu Vanotibatsira Sei?
Tinobatsira Sei Hama Dzedu Dziri Mumatambudziko?
Ndiani Boka Romuranda Akatendeka, Akangwara?
Dare Rinotungamirira Rinoshanda Sei Mazuva Ano?
Pahofisi Yebazi Panoitwei?
Mabhuku Edu Anonyorwa Uye Anoshandurwa Sei?
Mari Inoshandiswa Pabasa Redu Romunyika Yose Inobva Kupi?
Dzimba dzoUmambo​—Dzinovakirwei Uye Dzinovakwa Sei?
Tingabatsira Sei Kuti Imba Yedu yoUmambo Irambe Yakanaka?
Raibhurari yepaImba yoUmambo Inogona Kutibatsira Sei?
Zvii Zvingawanikwa paWebsite yedu?
Uchaita Kuda kwaJehovha Here?
SARUDZA MUTAURO Abbey Afrikaans Ahanta Aja Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Zimbabwe) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Comorian (Ngazidja) Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latgalian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Ponapean Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Thai (Northeastern) Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kana uri kudzidza Bhaibheri nemumwe weZvapupu zvaJehovha, ungangodaro uchiedza kufanoongorora mashoko acho musati maita chidzidzo chimwe nechimwe. Kuti ubatsirwe zvikuru, zvakanaka kuti uitewo saizvozvo usati wapinda musangano weungano. Tinonyanya kubatsirwa kana tikagara tichidaro.
Sarudza kuti uchadzidza nguvai uye uri kupi. Inguvai yaunogona kunyatsoisa pfungwa dzako pane zvaunodzidza? Mangwanani-ngwanani here, usati watanga kuita basa rako kana kuti kumanheru vana varara? Kunyange kana usingakwanisi kudzidza kwenguva yakareba, sarudza kuti inguva yakawanda sei yaungashandisa pakudzidza, woita kuti pasava nechinhu chinokuvhiringidza. Tsvaka nzvimbo yakanyarara, uye bvisa zvinhu zvose zvinokanganisa nokudzima redhiyo, terevhizheni, uye serura. Kunyengetera usati wadzidza kuchakubatsira kuti usanyanye kufunga zvimwe zvinhu kuitira kuti uise pfungwa paShoko raMwari.—VaFiripi 4:6, 7.
Maka mhinduro, uye gadzirira kuzopindura. Tanga nokunzwisisa kuti nyaya yacho iri kutaura nezvei. Funga nezvemusoro wenyaya yacho kana kuti wechitsauko chacho, ona kuti musoro mudiki mumwe nomumwe unobatana sei nenyaya yacho, uye ongorora chero mifananidzo nemibvunzo yokudzokorora zvinosimbisa pfungwa huru. Ibva waverenga ndima imwe neimwe uye tsvaka mhinduro dzemibvunzo yakadhindwa. Tsvaka woverenga magwaro asina mashoko akaiswa mundima uye funga kuti anotsigira sei nyaya yacho. (Mabasa 17:11) Paunowana mhinduro yomubvunzo wacho, maka mashoko mashomanana anokosha ari mundima anozokubatsira kuyeuka mhinduro yacho. Zvadaro, wava pamisangano unogona kusimudza ruoko rwako kana uchida wopa mhinduro pfupi uchishandisa mashoko ako.
Nokuongorora nyaya dzakasiyana-siyana dzinokurukurwa vhiki imwe neimwe pamisangano, uchawedzera pfungwa itsva ‘mudura rako repfuma’ yezivo yeBhaibheri.—Mateu 13:51, 52.
Chii chaunogona kugara uchiita kuti ugadzirire misangano?
Ungagadzirira sei kuti uzopindura pamusangano?
Uchitevedzera zvataurwa pamusoro apa, gadzirira Chidzidzo cheNharireyomurindi kana kuti Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano. Uchibatsirwa neanokudzidzisa Bhaibheri, gadzirira mhinduro yaungazopa pamusangano unotevera.
Misangano yeZvapupu zvaJehovha Inoitwa Sei?
Ona manamatiro atinoita.
Ndeipi Nzira Yakanakisisa Yokugadzirira Nayo Misangano yechiKristu?